တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (PBUH) ဖွားမြင်သည့်နေရာအား ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်း မလွတ် သည့်အတွက် ဖြိုချ ဖယ်ရှားရန် ဆော်ဒီ အာဏာ ပိုင် များ စီစဉ်နေ	Posted on March 4, 2014	by irrawadi တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (PBUH) ဖွားမြင်သည့်နေရာအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း မလွတ်သည့်အတွက် ဖြိုချဖယ်ရှားရန် ဆော်ဒီ အာဏာပိုင်များ စီစဉ်နေ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ကာဗာ ၀တ်ပြုကျောင်းတော် မတ်စဂျဒ် ဟာရမ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချဲထွင်ရေးအစီအစဉ် တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် တမန်တော်မြတ်ဖွားမြင်သည့် နေရာဟု ယူစရသည့် နေရာအား ဖြိုချရန် ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များက အစီအစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted in အစ္စလာမ်ဘာသာ. Bookmark the permalink.	← Rise in Bigotry Fuels Massacre Inside Myanmar